पति-पत्नीमा बढी उमेर ग्याप भए दाम्पत्य जीवनमा के असर गर्छ ? - Naya Pusta
पति-पत्नीमा बढी उमेर ग्याप भए दाम्पत्य जीवनमा के असर गर्छ ?
हामीकहाँ के मान्यता छ भने, पतिभन्दा पत्नीको उमेर कम हुनुपर्छ । हुन्छ पनि यस्तै। अपवादमा केही पत्नी पतिभन्दा बढी उमेरका हुन्छन्। एकै उमेरका पति-पत्नी भने एउटा संयोग मात्र हुनसक्छ।
सामान्यतः के देखिन्छ भने, पति भन्दा पत्नी दुई, तीन वा चार बर्षले कम उमेरकी। किन यस्तो हुनुपर्छ ? यसमा केहि सामाजिक र मनोवैज्ञानिक तर्क छन्। हाम्रो जस्तो पुरुषप्रधान समाजमा घरव्यवहार सम्हाल्ने वा परिवारलाई सही दिशावोध दिने भनेको पतिले हो भन्ने धारणा छ। यही धारणाले गर्दा पति परिपक्क हुनुपर्ने सोचाई छ।
यस्तो अवस्थामा उनीहरुबीच खास तालमेल हुँदैन । घरायसी, व्यवहारिक कुरामा उनीहरुको सोचाई विपरित हुनपुग्छ । एकजना बढी परिपक्क हुने, अको आलाकाँचो हुने । एकजना अर्कोमाथि बढी हावी हुने जस्ता संभावना अधिक रहन्छ।
पति-पत्नीबीचको उमेर अन्तरले उनीहरुको सम्बन्धमा निश्चयनै असर पार्छ।
१०. बिवाहपछि पार्टनरको पूर्व प्रेमी वा प्रेमिकाको बारेमा चासो गर्ने, त्यसैलाई बहसको विषय बनाउने गल्ती नगरौ, जसले दाम्पत्य सम्बन्ध चिरा पार्न सक्छ।
११. दाम्पत्य सम्बन्ध विश्वासमा टिकेको हुन्छ । त्यसैले विश्वासको धरातल कमजोर हुन दिन हुँदैन।
अन्तरिक्षमा यस्तोसम्म हुन्छ अन्तरिक्षयात्रीको जीवन
लिपस्टिककाबारे केही रोचक तथ्य, जुन तपाइँलाई थाहा नहुन सक्छ
जोशमा बाजी थाप्दा यस्तो आपत्